Dib u eegistii 21:27, 12 May 2014 ee Abshirdheere (Wadahadal | ku darsasho) (La difaacay "Bogga Hore" ([Wax ka bedel=Maamulada kaliya] (indefinite) [Wareeji=Maamulada kaliya] (indefinite)))
Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 5,832 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
9 Shawwal 1441 H
Kristoffer Kolombus wuxuu ahaa nin Talyaani ah, wuxuu noolaa sanadihii 1451 ilaa 1506. Kristoffer wuxuu ahaa badmaaxiye ah oo aad u safri jiray, wuxuu raadin jiray dhulalka ama qaaradaha. Kristoffer wuxuu ahaa ninka helay qaarada Ameerika sanadka marka oo ahaa 1492. Kristoffer wuxuu ku dhashtay magaalo ku taalo waqooyiga talyaaniga oo la dhoho Genova, wuxuu badda ku safri jiray asigoo da' yar. Aabihiis waxaa ladhaa Domoniko Kolumbus, hooyadiis neh Susana Fontanarosa. sanadka marka oo ahaa 1478kii, karistofer wuxuu tagay wadanka Boortuqaal, isla markaas neh wuxuu dhinaca galbeed ka raadinaayay, jidka tago wadanka Hindiya ee dhinaca badda. Kristoffer waxaa caawiyay dad ka mid ah boqortooyada Bortuqiiska, isla markaas neh waxay ku heshiiyeen hadii uu dhul helo in ee ayaga lacag ka helaayaan dhulkaas. Sanadka marka uu ahaa Agoosto 1492 ayaa waxaa bilaawday safarkoodii, 3 maraakiib ah oo saaran 90 qof ayaa u safartay dhinaca galbeedka ee badweynta atlaantik, kadib waxay tageen Ameerika, iyaga oo rabay in ay tagaan hindiya. Isla sanadkii Waxay tageen Meel jasiirad ah, wuxuuna helay wadanka Kuuba, hal markab ayuu uga tegay meesha, marka ee dhacday in ee dadka saarnaa markabkaas in ee raadiyaan Dahab. sanadka marka oo ahaa 1493dii Kristoffer dib oo u soo noqday, asiga oo sideed indian ah soo afduubtay. (SII AQRI)
Taariikhdu Maata Waa 31 May 2020 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Tiro Mutuxan ((Af-Ingiriis: Prime number)) waa Tiro tirsiimo kan ugu weyn wuxuu ka biloowdaa 1, aan aqbalaynin Uqeybinta asiga oo qura ama 1 oo qura. waxaa loogu yeeraa tiro tisiimo ka saraysa 1 mutux la' mutux la'. Tusaale ahaan 5 waa tiro mutuxan maxaa yeelay ma aqbalaayo qaybinta 1 mooyee iyo 5, halka 6 waa tiro mutux la maxaa yeelay waxay u qeybsantaa 1, 2 ,3 iyo 6. Sida Aragtiin aasaasiga aritmatig kaalinta ay tirooyinaka mutuxan ku leeyihiin Aragti tiro : Dhammaan Abyoone tirsiimo kan ugu weyn 1 le'eg taranka ururta kali ee ka mid ah tirooyinka mutuxan (haba lagu kala hormariyee tirooyinkaas ururadaan)
Si loo xadido mutuxnaanta tira uun, waxaa jirta hab fudud laakiin waa lagu daahayaa, waxaa lagu magacaabaa qaybinta soo noqnoqota waxay ka dhigantahay in loo qeybsho, tiradaan iyo tiradii la koobay ee 2 iyo Xidid labajibbaaran ee tiro qayiman. waxaa jirta logaarom kale oo aad u shaqaynaysa marka la qeybinayo loona adeegsado si loo xadido mutuxnaanta teedkeedu, gaar ahaan marka laga hadlayo tirooyinka leh muuqaal gaar ah, tirada mersenne.
Ururka tirooyinka mutuxan ee Urur makoobane. waa Aragtin ku tsusaysa yuklid muddo laga joogo 300 sano C.H, uma garan kartid hab uun, dhammaan qiimaha waa tiro mutuxan. laakiin u kala qeybinta tirooyinka mutuxan waxay u baahantahay in la darso aragtina laga qaato. Aragtiinta ugu horeysa waxay aadeysaa jihadaan waana Aragtiinka tiro mutuxan, taasoo ku tusaysa qarnigii sagaal iyo tobanaad taasoo ah Itimaalka in uu noqdo tiro tirsiimo uun n, mid loo doortay hab kalayaac ah, mutuxan, saami lid ku ah tirada lambarada taasoo ka kooban tiradaan. haddii hab kale loo dhigo, waxey lid ku noqonaysaa u dhignaanta logardam caadi ah ee n.
MQAALKA SII AQRI · Maqaallo kale oo Kala duwan
Babaay waa geed mirood kabaxa Soomaaliya gaar ahaan meelaha webiga ka ag-dhow
Dameer dhaan raac *** Ceel dad liqa, ul baa lagu dayaa
Carab loaad caws looma tilmaamo *** Carraabo, fadhaa quusiyey
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 5,832 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogga_Hore&oldid=132249"